Ihu igwe nke Portugal: àgwà, okpomọkụ na mmiri ozuzo | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ya Portugal ihu igwe. Ebe ọ bụ ebe Oké Osimiri Atlantic na-emetụta, ọ nwere ihu igwe dị mma. Ebe ugwu na-ajụ oyi nke ukwuu ma na-ezo karịa n'ebe ugwu, ma ọ na-eji nke nta nke nta na-ekpo ọkụ, na-achakwa anwụ ka ị na-aga n'ebe ndịda. N'ime oke ndịda anyị nwere Algarve nke nwere ihu igwe ikuku na-acha ọkụ na anwụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mgbanwe niile nke ihu igwe nke Portugal.
2 N'oge oyi na ọkọchị n'oge ihu igwe nke Portugal
3 Esemokwu ndị dị na ihu igwe nke Portugal na ugwu na ndịda
Otu n'ime ihe ọjọọ pụtara ìhè ihe banyere ebe nke ihe dị iche nke climates ma ọ bụrụ na ị na-n'ebe ugwu ma ọ bụ n'ebe ndịda. N'ime ime obodo dị nso na oke ala na Spain ọ na-aghọ Ọnọdụ ihu igwe dịtụ ntakịrị. N'etiti na akụkụ ugwu enwere ụfọdụ ugwu na-agbanwe ihu igwe. Enwere ike ịgba ọsọ Sierra de la Estrella n'oge oyi ka okpomọkụ na-agbadata ruo n'ókè nke na snow jupụtara na ya.
Mgbe anyị na-ezo aka n’anwụ na ihu igwe nke Portugal anyị na-ahụ na anwụ na-acha ebe niile n’oge ọkọchị. N'oge a, Azores anticyclone na-echebe Portugal. Agbanyeghị, n'oge ụfọdụ, anyị na-ahụ ọdụ nke ọgba aghara Atlantic nke gafere n'akụkụ ugwu ma na-eweta ajọ ihu igwe. N'ime oge ọzọ nke afọ enweghị ụkọ mmiri ozuzo ebe ọ bụ na ha na-adịkarị ụba ma na-aba ụba ka anyị na-aga n'ihu n'akụkụ ugwu. Maka nke a, anyị na - ahụ akụkụ ugwu ka ọ na - acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma jiri nwayọ nwayọ ga - adị nke kpọrọ nkụ ka anyị na-aga n’ebe ndịda.
Algarve bụ ebe kpọrọ nkụ na nke kachasị mma na Portugal. Mmiri mmiri ozuzo kwa afọ, nke ruru 1.450 mm na Braga na 1.100 mm na Porto, ruru ihe dịka 900 mm na Coimbra, 700 mm na Lisbon, ma gbadaa gburugburu 500 mm na Algarve. Oge mmiri kacha zoo bụ oge udu mmiri.
N'oge oyi na ọkọchị n'oge ihu igwe nke Portugal
Ka anyị lee ihe bụ njirimara oge oyi na ọkọchị na ihu igwe nke Portugal. Oge oyi dị nwayọ n'ụsọ osimiri ọbụna na mpaghara ebe ugwu ebe ọ bụ na nkezi okpomọkụ na Jenụwarị si na 9.5 degrees na Porto, ruo 11,5 Celsius C na Lisbon, na 12 Celsius C na Faro. N'oge oyi, enwere oge nwere ezigbo ihu igwe ebe ọ bụ na Azores anticyclone nwere ike iru obodo a. Agbanyeghị, anyị na-ahụkwa ebili mmiri nke ihu igwe na-adịghị mma, mmiri ozuzo na ifufe. Ikuku na-ejikarị ike dị ukwuu site na squall na-efe, karịsịa site na mpaghara ugwu.
Ọnọdụ Portugal n’ihe banyere oke osimiri na-ekwe nkwa ezi ebe mgbaba site na mmiri oyi na ntu oyi abalị. N'ezie, ọ dị obere na ụdị oyi dị otú a dị. Ndekọ maka okpomọkụ n'ụsọ oké osimiri bụ ogo ole na ole n'okpuru efu na ugwu na gburugburu ogo efu na ndịda. N'aka nke ọzọ, n'ime ime obodo breeki dịtụ nkọ karịa ebe ọ bụ ihu igwe. E nwere ebe ugwu na ugwu ebe ọ na-eduga mgbe ụfọdụ.
Banyere oge ọkọchị, anyị na-enwe ụbọchị anwụ na-acha ebe niile nwere ihu igwe dị jụụ ma-ọbụ dị jụụ na ụsọ ugwu na okpomoku na etiti na mpaghara ndịda. N'ebe ụfọdụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ogo 21, dịka ọ dị na Porto, nke anyị na-ahụ kwa ụbọchị kachasị nke ogo 25. N'ebe a na-ekpughere ikuku ifufe, ọ na-adịkarị jụụ na ọbụna n'oge ọkọchị. A na-echebe oke osimiri Algarve ma nwee okpomọkụ yiri nke Lisbon. Okpomọkụ na-esiwanye ike n’ime ime ebe ahụ dị n’etiti na mpaghara ndịda na ndagwurugwu na ndagwurugwu. Enwere ụbọchị ole na ole nwere ike ịda mba na ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye nke ọma.
Ihe kachasị mma bụ na ebili mmiri nke Africa na-emetụta Portugal niile. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọta okpomọkụ nke ruo ogo 37 na ụsọ oké osimiri, ebe na mpaghara ndị nwere ike ịgafe ogo 40.
Banyere mpaghara etiti, ha dị jụụ na mgbago ugwu ma dịrị jụụ na ndịda. N'ebe a, mmiri ozuzo na-adịkarị, ọkachasị n'ebe ugwu ebe ọ na-adịkarị obere oyi.
Esemokwu ndị dị na ihu igwe nke Portugal na ugwu na ndịda
Anyị ga-ahụ ihe dị iche na ihu igwe nke Portugal ma ọ bụrụ na anyị gaa n'akụkụ ugwu ma ọ bụ akụkụ ndịda.
Ugwu ugwu na-enwekarị mmiri ozuzo n'oge oge oyi, ma n'oge ọkọchị, ha dị ụkọ na ụkọ. N'akụkụ ugwu nke ụsọ oké osimiri, Anyị nwere osimiri dị jụụ na ọbụna n’oge ọkọchị. N'ebe ụfọdụ, ọ nwere ike iru ogo 18 na ọnwa nke July. Banyere ebe ugwu dị n'ime ime, oge oyi na-ajụ oyi, ọkachasị ka anyị na-abawanye elu. Eluigwe na-eto oge ọ bụla anyị si n’oké osimiri pụọ wee ruo n’ókè ọ nwere ike iwere.
Akụkụ dị na nsọtụ ebe ugwu ọdịda anyanwụ kwekọrọ na Bragança. Ọ dị na elu nke mita 700 n'elu oke osimiri ma nwee ntakịrị oge oyi. Lee okpomọkụ nwere ike iru dị ka -10 ogo. Oge ọkọchị na-adị ọkụ karị ma na-acha n’anwụ, ọbụlagodi na abalị nile dị jụụ. Mgbe ụfọdụ enwere m ike ịhụ ezigbo okpomọkụ n'ime ebe a. N'ebe mpaghara ndịda, na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Coimbra anyị nwere ugwu ugwu nke jedebere na elu nke mita 1.993. N'ebe a, okpomọkụ nwere ike ịdị gburugburu -15 / -20 degrees.
Ike nke etiti na ndịda anyị nwere oge oyi na-enwe nsogbu na ọgba aghara sitere na Atlantic Ocean. Ọgba aghara ndị a na - eme obere oge na ikuku ikuku anaghị adịkarị. Oge okpomọkụ dị ọkụ karị, mana ọ bụghị n'ụsọ osimiri Don Ocean ikuku na-adị ezigbo mma n'oge ọkọchị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu igwe nke Portugal na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ihu igwe nke Portugal